Qaabka iyo shuruudaha: ciyaaryahanka Afrika ugu wanaagsan ee BBC sanadka 2016 - BBC News Somali
Qaabka iyo shuruudaha: ciyaaryahanka Afrika ugu wanaagsan ee BBC sanadka 2016
Waxaa la shaaciyay ciyaaryahannada isugu soo haray tartanka ciyaaryahan kubadda cagta ee ugu wanaagsan Afrika ee BBC. Halkan ka codee halkana ka eeg Qaabka iyo shuruudaha codeynta
Shanta ciyaartooy ee u tartamaya abaalmarintan ayaa kala ah Yaya Toure oo Ivory Coast u dhashay, Pierre-Emerick Aubameyang oo Gabon ah, Andre Ayew oo Ghana kasoo jeeda, Sadio Mane oo Senegal ah, iyo Riyad Mahrez oo u dhashay Algeria.
Laacibiitan ayaa waxaa soo xulay khubaro ku xeel dheer kubadda cagta ee Afrika, waxaana u codeyn doona dadweynaha. Afar ka mid ah shantan ciyaartooy ayaa hadda ka dheela horyaalka Ingiriiska.
Faahfaahinta qaabka codaynta iyo sida loo dooranayo waa sidan hoos ku xusan.
Hanaanka loo soo xulo ciyaaryahannada isu soo haray waa sidan hoos ku xusan.
Magacaabidda shanta ciyaaryahan ee isu soo haray waxaa soo dhigay qaar ka mid ah khuburadda ugu saraysa Afrika ee dhanka kubadda cagta.
Khabiirkaste oo dal gooni ah ka soo jeedana waxaa la waydiiyay in uu sheego saddexda ciyaaryahan ee uu is leeyahay way ugu fiican yihiin isaga oo sheegaya sida ay ukala
Waxaa la waydiiyay in ay magacaabidooda ku saleeyaan xulashadan: awoodiisa xirfadeed; la shaqaynta kooxda inteeda kale; xariifnimo joogto ah; saamaynta uu ku leeyahay natiijooyinka iyo dhexdhexaadnimo arrimahaas oo uu soo bandhigay xilli ciyaareedkii 2015/16.
Qeexidda cidda ka xaqa u leh in ay ka mid noqoto
Dadku xaq bay u leeyihiin in ay ku guulaystaan abaalmarinta ciyaaryahanka kubadda cagta ee ugu wanaagsan Afrika ee BBC waase haddii ay xaq u leeyihiin in ay u safan karaan xul ka ka mid ah kooxaha qaramada qaaradda Afrika.
Marka ay dhamaato codaynta dadka isu soo haray cida ay guushu raaci doonto waxaa go'aamin doona codayn dadwayne oo dhanka Online-ka ah.
Natiijada kama dambaysta ah waxaa la shaacin doonaa saacaddu marka ay tahay 17:35 GMT Isniinta oo taariikhdu ku began tahay 12 December, waxaana si toos ah loogala socon karaa barnaamijka Focus on Africa oo TV ahaan iyo Idaacad ahaanba loo heli karo.
Waxaa kale oo laga heli karaa bogga gaar ah ah ee BBC u samaysay ciyaaryahanka kubadda cagta ee ugu wanaagsan Afrika iyada oo ay weheliso dhamaan macluumaadka muhiimka ah. Haddii la kala rayn waayo waa la wadaagi.
Sida loogu codayn karo Online-ka.
Booqo boggan Halkan ka codee raacna nidaamka loogu talogalay. Dadka codkooda ku soo dhiibanaya Online-ka hal mar oo kali ah ayay codkooda kaga soo dhiiban karaan combiyuutar kaste.
Codka waxaa maamula BBC abaalmarintuna waa in ay waafaqdaa xeerarka BBC ee anshaxa tartanka iyo codaynta oo laga heli kara www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/appendix2
Qofka guulaysta wuxuu heli doonaa koob waxaana lagu wareejin doonaa darajada ah ciyaaryahanka kubadda cagta ee ugu wanaagsan Afrika ee BBC.
Dadka isugu soo hara tartankan waxaa soo xula gudi ka kooban khuburo dhanka kubadda ah oo Afrika oo dhan laga soo kala xulay.
Shuruudaha laga fiirinayo qofkaste waa awoodiisa xirfadeed; la shaqaynta kooxda inteeda kale; xariifnimo joogto ah; saamaynta uu ku leeyahay natiijooyinka iyo dhexdhexaadnimo arrimahaas oo uu soo bandhigay xilli ciyaareedkii 2015/16.
Dadku waxay codkooda ku soo dhiiban karaan bogan: www.bbc.com/africanfootball
BBC-du Macluumaadkaaga gaarka ah waxay u isticmaali doontaa oo kali ah kala habaynta codadka mana daabici doonto lamana wadaagi doonto cid kale adiga oon lagaala tashanin. Haddii aad jeceshahay in aad macluumaad dheeraad ah ka ogaato dhawridda xogtaada gaarka ah booqo bogga http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/
Wakhtiga u dambeeya ee codaynta waa 1800 GMT ee maalinta Isniinta ah oo taariikhduna ku began tahay 28 November 2016.
Go'aanka codayntu waa kama dambays, racfaanna lagama qaadan karo.
Abaalmarinta waa in loo qaataa sida ay tahay lamana dib dhigikaro, ma jirto lacag caddaan ah oo lagu badali doono abaalmarinta. Wax abaalmarin ahna laguma helayo in aad codayso.
BBC, iyo dhamaan cidii ay wada shaqayn leeyihiin ama ay hawl u dirsadaan maqadanayaan masuuliyadda ka dhalata cilad farsamo oo horseeda in cod lumo ama aan si sax ah loo diiwaangalinin.
BBC waxay xaq u leedahay in ay joojiso codaynta ama ay dadka qaar xanibto haddi ay jiraan Sababo sax ah oo la xiriira in si khalad ah loo codeeyay ama la isku dayay in loo dhaco oo wax isdabamarin lagu sameeyo codaynta. BBC waxay xaq u leedahay in ay doorato hannaan kale oo lagu codeeyo.BBC ma daabici doonto macluumaadkaas lamana wadaagi doonto cid kale marka laga reebo meeshii looga baahdo si wax looga qabto. Haddii aad macluumaad dheeraad ah u baahantahay booqo http://www.bbc.co.uk/usingthebbc/privacy/
Kuwa ka qaybqaadanaya codaynta waxaa looga baahan yahay in ay aqbalaan shuruucdaas una hoggaansamaan. Fadlan la soco qof u shaqeeya BBC ama qof kaste oo ku lugleh hannaankan abaalmarinta xaq uma laha in uu codeeyo.
Dhamaan codaynta waxaa dusha kala socondoona BBC Afrika.
BBC waxay xaq u leedahay in ay meesha ka saarto murashaxiinta amaba ay hakiso abaalmarinta haddii abaalmarintaasi ay khatar galiso BBC-da.
Shuruucdaas waa lagu saleeyay kuwa England and Wales.